Taura mabikirwo 2 - Ebook ine hutano yekubika neThermomix mune isingasviki makumi matatu '
Taura mabikirwo 2 - kubika zvine hutano mumaminitsi mashoma makumi matatu
Pakupedzisira iyo chikamu chechipiri chebhuku rekubika reThermomix, muunganidzwa wemapepa matsva akagadzirirwa vese avo vanhu vane shoma nguva yekubika uye vasingade kurega kutakura chikafu chakakwana, chine hutano uye chakaringana.
40 mitsva yekubika kugadzirira mune isingasviki maminetsi makumi matatu uye haina kumbobvira yaburitswa pane blog
Iye zvino kupfuura nakare kose isu tinofanirwa kushandisa yakawanda nguva tiri pamba, uye kazhinji zvisungo havatibvumidze isu kuwana nguva inodiwa kutanga kubika. Uku kuunganidzwa kwemaresipi kunosanganisira zvinonaka zvidyiro zvikuru, mativi anoshamisa uye madhiri akaomesesa yakagadzirira mumaminitsi asingasviki makumi matatu uye inokodzera mhuri yese. Iwe unoda muenzaniso here? Dhawunirodha recipe yeiyo nyowani mahara eBook.
Iri ibhuku rinobika mumadhijitari fomati iyo unogona kutarisa pese paunoda kubva pakombuta yako, piritsi, nharembozha kana kupurinda pabepa. Iwe uchagara uine icho padyo kunyangwe iwe usiri padyo neThermomix yako.
TENGA EBOOK - € 9,99
Ndeapi mabikirwo aunowana?
Iwe uchashamisika shamwari dzako uye mhuri ne kutanga inotapira se:
Quinoa, salmon yakasvuta uye mbiya yenungu
Kutanga makosi akadai se:
Chiedza chakareruka cheachena asparagus
Mupunga wemupunga nemuriwo uye hove dzegungwa
Murairi uye pasita ndiro:
Creamy mupunga ne cuttlefish
Spaghetti ine cheese muto, sipinashi uye mazambiringa akaomeswa
Nyama, hove uye madhiri ehove:
Chicken nemiriwo, apuro uye prunes
Gin-dhizaini prawns nehama yemukoma
Madhiri anotapira akadai se:
Kurumidza Chokoreti Raspberry Cookies
Lemon kirimu magirazi ane muto wewisi
Uye zvichingodaro kune yakazara makumi mana anonaka mabikirwo!